युगसम्बाद साप्ताहिक - के के ग¥यो कांग्रेस सरकारले ?
Friday, 02.21.2020, 12:07pm (GMT+5.5) Home Contact
के के ग¥यो कांग्रेस सरकारले ?
Tuesday, 02.20.2018, 11:01am (GMT+5.5)
काठमाडौं । आलोचना, आरोप, बिरोधकाबीच शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बिदा लिएर नयाँ सरकार गठन भएको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी, राप्रपा सम्मिलित सो सरकारले तमाम अपजसका बीच एउटा ऐतिहासिक काम भने सम्पन्न गरेको छ । सरकारले संविधानतः निश्चित अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर ढिला भए पनि सत्ता हस्तान्तरण गरेको छ ।
यो एउटा सुखद पक्ष हो भने कांग्रेस सरकारले केही राम्रा काम पनि गरेको छ । जाँदाजाँदै बेला प्रचार शैलीमा वृद्धभत्ता वृद्धि र भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख अनुदानको निर्णय राम्रो मानिए पनि यसले राजनीतिक रुपमा भावी सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नेछ । अर्कोतिर देउवाले आफ्नो नाममा यसअघि कायम गरेको सबभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डलको कीर्तिमानमा नयाँ कीर्ति थपे । २०५२ सालमा ५२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका देउवाले यसपट ६४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल हो ।
त्यस्तै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन देउवा सरकारको कीर्तिमान नै हो । यो लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि पटक्कै सुहाउने काम हैन । त्यस्तै सदाचारको घोषणा गरेर सबभन्दा बढी विदेश भ्रमणमा पसा खर्च गर्ने देउवा सरकार हो भने आर्थिक सहायताका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने काम पनि उपद्रैसंग भयो । विदेश भ्रमण र आर्थिक सहायताका लागि मात्र देउवाले ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरे । भूकम्प पीडित र वृद्धभत्ताबढाउने घोषणा गरेर देउवाले भावी सरकारलाई ६ अर्ब रुपैयाँ भार थपिदिए ।
यो सबै चुनाव हारेको आक्रोश मात्र हो । आर्थिक सहायता र विदेश भ्रमणमा धेरै थोरै होलाा जुनसुकै सरकारले पैसा खर्च गर्छन् । मन्त्रिमण्डल सरकार टिकाउन बन्ने नै भयो । बाम गठबन्धनकै कति सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्छ भन्ने यक्किन छैन । दुई पार्टीको भागवण्डा मिलाउदा ठूलै मन्त्रिमण्डल बन्नसक्छ ।
यी सबकाबीच अब कांग्रेसलाई सरकारले कसरी साथ लिन्छ यो महत्वपूर्ण विषय छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख निर्वाचन बाँकी नै छ । विभिन्न समितिहरुको सभापति चयन पनि बाँकी नै छ । कांग्रेसलाई संसदभित्रै कायम राख्न सरकारपक्षले के गर्छ भन्ने अहिले महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।
चुनावअघि भनिएजस्तो व्यवहार सत्तापक्षका नेताहरुले देखाए भने मुलुकमा राजनीतिक असहिष्णुताको पराकाष्ठा नाघ्नेछ । चुनावका बेला बाम गठबन्धनका नेताहरुले भन्ने गर्थे, “अब यो देशबाट कांग्रेस मेटियो । कांग्रेस बुढो भयो उसलाई पन्छाउनुपर्छ ।” किनभने ाजनीतिमा दुश्मन र सत्रु स्थायी हुँदैनन्, अहिले बाम गठबन्धनको लगभग दुई तिहाई मत छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रियसभामा पनि उनीहरुको हैसियत उच्च छ । मुलुकको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संख्यात्मक रुपमा निकै साँघुरिएको छ । अब कांग्रेसले के गर्छ र कांग्रेसलाई भावी, सरकार, भावी संसदले कसरी समेट्छ भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । पछिल्ला समाचारहरुमा कांग्रेस सडक तताउने मुडमा देखिएको छ । उसको सरकारले गरेका निर्णयहरु नउल्ट्याउन चेतावनी दिइसकेको छ ।
कांग्रेस सरकारमा जाँदैन, उसले सरकारमा जाने दावी गर्नु पनि हुँदैन । तर उसलाई संसदमा भूमिका दिने कि नदिने ? केन्द्रदेखि प्रदेश संसदमा कांग्रेसलाई भूमिका दिएर सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । खासमा कांग्रेसलाई संसदीय समिति र उपसभामुखमा भूमिका दिनुपर्ने माग कांग्रेस नेताहरुकै रहेको छ ।
बाम गठबन्धनले पार्टी एकता गर्ने भएकाले सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टी र लिंगको हुनुपर्ने मान्यतामा रहेकाले उपसभामुखमा बाम गठबन्धनले नै अफर नै गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
अहिले प्रचण्ड बहुमतको दम्भमा बाम गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई माखो मिल्काएजस्तो गरे यसले असल राजनीतिक संस्कार सिकाउँदैन । असल राजनीतिक संस्कारको विकास भएन भने राजनीतिक स्थिरता पनि हुँदैन । पाँच वर्ष सरकार चलाउने गठबन्धनले म्याण्डेट पाए पनि विपक्षीलाई सधैं सडकमा पसारो पर्न छोड्ने हो भने पाँच वर्ष होहल्ला र हुलहुज्जडमै बित्ने निश्चित छ ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिले आफूले गर्ने व्यवहार नै भावी दिनमा आफूले पाउने हो । राजनीतिमा सधैं एउटै दलको वा समूहको वर्चश्व रहँदैन र एउटै दलले मात्रै सबैथोक गर्छु भनेर पनि सक्दैन । सदनदेखि सडकसम्मबाट सहयोग चाहिन्छ ।
मुलुकको समृद्धिको नारा घन्काएर प्रचण्ड बहुमत हाँसिल गरेका बाम गठबन्धनले पार्टी एकतापछि नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा इमानदारपूर्वक लाग्ने वातावरण बनादिनुपर्छ । हैन, पार्टी एकता भएन भने पनि कांगेसलाई अवमूल्यन गरेर जान सकिंदैन । वर्तमान राजनीतिको कटु यथार्थ हो यो ।
प्रदेश सरकारमा बाम गठबन्धनको सहमति : केन्द्रीय सरकार बन्नु अघि नै पार्टी एकता (01.30.2018)
सीमा अतिक्रमण : सबैले देख्ने, सरकारले नदेख्ने (01.30.2018)
ह्वेल उम्कियो– ठूला माछासंगै निर्दोष असला फन्दामा
वैज्ञानिकहरुले भेउ नपाएको एउटा सम्भावना - यादब देवकोटा
अख्तियारको प्रशंसनीय कदम
सत्ता र पैसाले ल्याएको आजको विचलन - महेश्वर शर्मा
अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने हिम्मत भए !- तारा सुवेदी
अनलाइन मार्केटिङ्का नाममा मानव तस्कर ठगीमा परेका किशोरकिशोरी सिलिगुडीमा बन्धक
प्रधानमन्त्री ओलीलाई एसियाली नेतृत्वकर्ता पुरस्कार
तीन महिनाभित्र माथिल्लो कर्णालीको विद्युत खरदि सम्झौता हुने
प्रेरणाले दाबी गरेको दाइजो ः ट्रष्टकै सम्पत्ति भएको ठहर
बरु चीनमै उपचार गरौं